Vaovao - Fahalalana fitaovana famonosana: Fantaro ny toetran'ny taratasy, manatsara ny kalitaon'ny fonosana sy ny fanontana
Fahalalana fitaovana famonosana: Fantaro ny toetran'ny taratasy, manatsara ny kalitaon'ny fonosana sy ny fanontana
Abstract: Ny taratasy no fitaovana ampiasaina amin'ny fanontana amin'ny fonosana matetika. Ny fananana ara-batana dia misy fiatraikany mivantana na tsy mivantana amin'ny kalitaon'ny fanontana. Ny fahatakarana marina sy ny fifehezana ny natiora amin'ny taratasy, arakaraka ny toetran'ny vokatra, ny fampiasana taratasy araka ny antonony hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra fanontana, dia hanana anjara toerana tsara amin'ny fampiroboroboana. Ity taratasy hizarana ny toetra mampiavaka ny atiny mifandraika amin'ny taratasy, ho an'ny namana:
Ny karazana taratasy vita pirinty isan-karazany izay manana toetra manokana, miankina amin'ny fomba fanontana.
Taratasy ampiasaina manokana amin'ny fanontana. Araka ny fampiasana dia azo zaraina ho: printim-baovao, boky ary taratasy an-gazety, taratasy firakofana, taratasy fiarovana sns. Araka ny fomba fanontana isan-karazany dia azo zaraina ho taratasy fanontana taratasy, taratasy fanontana gravure, taratasy fanontana offset sns.
Izy io dia manondro ny lanjan-taratasy isaky ny velaran'ny faritra, asehon'ny g / ㎡, izany hoe ny lanjan'ny gram 1 metatra toradroa. Ny haavon'ny taratasy dia mamaritra ny toetra ara-batana amin'ny taratasy, toy ny tanjaka mihombo, ny diplaoman'ny triatra, ny henjana, ny hamafiny ary ny hateviny. Izany ihany koa no antony lehibe mahatonga ny milina fanontana haingam-pandeha tsy tsara ho an'ny taratasy miisa 35g / ㎡, hany ka mora ny miseho amin'ny taratasy tsy ara-dalàna, tsy avela ny overprint ary antony hafa. Noho izany, arakaraka ny toetra mampiavaka ny fitaovana, ny famaritana habetsahan'ny ampahany fanontana mifanaraka amin'ny zava-bitany dia azo hamokarana, mba hampihenana ny fanjifana, hanatsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny fahaizan'ny fanontana fitaovana.
Ny hatevin'ny taratasy ve, ny haben'ny fandrefesana dia matetika aseho amin'ny μm na mm. Ny hateviny sy ny habetsahana ary ny fitifirana dia misy fifandraisana akaiky, amin'ny ankapobeny, ny hatevin'ny taratasy dia lehibe, ny habeny mifanentana ambony, fa ny fifandraisana misy eo amin'izy roa kosa dia tsy tanteraka. Ny taratasy sasany, na dia manify aza, dia mitovy na mihoatra ny hateviny. Mampiseho izany fa ny fihenjanan'ny firafitry ny fibre taratasy dia mamaritra ny habetsahana sy ny hatevin'ny taratasy. Raha ny fahitana ny fanontana sy ny kalitaon'ny fonosana dia tena zava-dehibe ny hatevin'ny taratasy fanamiana. Raha tsy izany dia hisy fiantraikany amin'ny taratasy fanavaozana mandeha ho azy, fanerena fanontana ary ny kalitaon'ny ranomainty. Raha mampiasa hatevin'ny taratasy vita pirinty samy hafa ianao, dia hiteraka fahasamihafana lehibe eo amin'ny hatevin'ny boky vita.
Izy io dia manondro ny lanjan'ny taratasy isaky ny santimetatra toratelo, aseho amin'ny g / C㎡. Ny hamafin'ny taratasy dia refesina amin'ny habetsahana sy ny hateviny araka ity paika manaraka ity: D = G / D × 1000, izay: G dia maneho ny habetsaky ny taratasy; D ny hatevin'ny taratasy. Ny fihamafisana dia refesin'ny hakitroky ny firafitry ny taratasy, raha tery loatra, ny triatra taratasy, ny opacity ary ny fitrohana ranomainty dia hihena be, ny fanosorana dia tsy mora maina, ary mora ny mamokatra tranga maloto ambany. Noho izany, rehefa manonta taratasy misy tery be, dia tokony hokarakaraina ny fifehezana ny habetsaky ny firakotra ranomainty, ary ny safidin'ny fahamainana sy ny ranomainty mifanandrify aminy.
Moa ve ny fahombiazan'ny fanoherana ny taratasy amin'ny famatrarana zavatra iray hafa, fa koa ny fahombiazan'ny tariby fibre taratasy. Ny hamafin'ny taratasy dia ambany, afaka mahazo marika mazava kokoa. Ny fizotran'ny fanontana pirinty amin'ny ankapobeny dia mety kokoa amin'ny fanontana amin'ny taratasy tsy dia mafy loatra, ka tsara ny kalitaon'ny ranomainty, ary avo koa ny tahan'ny fanoherana ny lovia fanontana.
Manondro ny ambaratongan'ny tampon-taratasy, etona segondra, azo refesina. Ny fitsipiky ny fizahana dia: eo ambanin'ny banga sy tsindry sasany, habetsaky ny rivotra amin'ny alàlan'ny vata fitaratra sy ny elanelana misy eo anelanelan'ny fotoana laniana. Ny taratasy malama kokoa, ny miadana ny rivotra mihetsika ao aminy, ary ny mifamadika amin'izany. Ny fanontana dia mitaky taratasy misy malefaka antonony, malefaka avo, teboka kely dia hamokatra am-pahatokiana, fa ny pirinty feno kosa dia tokony hihaino tsara hisorohana ny lamosina ao aoriana. Raha ambany ny malama amin'ny taratasy, lehibe ny fanerena fanontana ilaina, lehibe koa ny fihinanana ranomainty.
Manondro ireo fahalotoana ambonin'ireo tampon-taratasy, ny lokony sy ny lokon'ny taratasy dia misy fahasamihafana miharihary. Ny mari-pahaizana momba ny vovoka dia refesin'ny fahalotoana amin'ny taratasy, aseho amin'ny isan'ny faritra vovoka amin'ny faritra iray isaky ny metatra toradroa ny velaran'ny taratasy. Be ny vovoka taratasy, ny fanontana fanontam-pirinty, mahantra ny vokan'ny famokarana teboka, ny teboka maloto misy fiantraikany amin'ny hatsaran'ny vokatra.
Matetika ny tampon-taratasy amin'ny taratasy fanoratana, ny taratasy manarona ary ny fonosana dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fandrefesana sosona miaro amin'ny fanoherana ny rano. Fomba fampiharana ny penina sivy, penina mahazatra mahazatra atsobika ao anaty ranomainty manokana ao anatin'ny segondra vitsy, manoritra tsipika eo amin'ny taratasy, jereo ny sakan'ny lehibe indrindra amin'ny tsy firoboroboany, ny tsy fahitana azy, mm ny singa. Ny haben'ny taratasy dia avo, ny famirapiratan'ny fanontam-pirinty dia avo, tsy dia mihinana ranomainty.
Ny fahaizan'ny taratasy mitroka ranomainty. Malemy, mamelatra taratasy tsara, malemy ny fitrohana ranomainty, miadana miadana ny sosona ink, ary mora miraikitra amin'ny fanontana maloto. Mifanohitra amin'izany kosa, matanjaka ny fifohana ny ranomainty, mora maina ny manonta.
Izy io dia manondro ny fitantanana ny fandaminana ny fibre taratasy. Amin'ny dingan'ny fanaovana taratasy, ny fibre dia mihazakazaka manaraka ny torolàlana lavareny an'ny milina taratasy. Izy io dia azo ekena amin'ny alàlan'ny zoro maranitra amin'ireo marika net. Mitsangana ny mitsangana mitsangana. Ny lanjan'ny fiovana amin'ny fanontana voa amin'ny taratasy lava dia kely. Amin'ny dingan'ny fanontana voa amin'ny taratasy miampita, ny fiovan'ny fanitarana dia lehibe, ary ny tanjaka amam-pahefana sy ny haavon'ny ranomaso dia ratsy.
10 tahan'ny fanitarana
Izy io dia manondro ny taratasy amin'ny fidiran'ny hamandoana na ny fihenan'ny hamandoana aorian'ny haben'ny fiovaovana. Ny malefaka kokoa amin'ny vatan'ny taratasy, ny ambany ny tery, ny avo kokoa ny tahan'ny fanitarana ny taratasy; Mifanohitra amin'izany, mihena ny tahan'ny scaling. Ankoatr'izay, ny malama, ny haben'ny taratasy tsara dia kely, ny tahan'ny fanitarana azy dia kely. Toy ny taratasy mifono sisiny roa, karatra fitaratra ary taratasy A offset, sns.
Amin'ny ankapobeny, ny mahia sy ny tery kokoa amin'ny taratasy, dia vao mainka miaina. Ny haben'ny fahaizan'ny fofonaina dia ml / min (milliliter isa-minitra) na s / 100ml (faharoa / 100ml), izay manondro ny habetsaky ny rivotra nandalo ny taratasy tao anatin'ny 1 minitra na ny fotoana nilaina namakivakiana rivotra 100ml. Ny taratasy misy fividianana rivotra lehibe dia mora manentsina taratasy roa amin'ny fizotran'ny fanontana.
Izy io dia manondro ny famirapiratan'ny taratasy, raha ny jiro rehetra taratra avy amin'ny taratasy, ny maso mitanjaka dia afaka mahita fa fotsy. Famaritana ny fotsifotsy taratasy, mazàna ny fotsifotsy oksidan'ny manezioma dia 100% ho fenitra, raiso ny santionan'ny taratasy amin'ny alàlan'ny fanadiovan-jiro manga, ny fahadiovan'ny taratra kely dia ratsy. Ny metatra fotsifotsy photoelectric dia azo ampiasaina koa handrefesana ny fotsifotsy. Ny singa fotsifotsy dia 11 isan-jato. Ny taratasy fotsifotsy avo, ny ranomainty fanontam-pirinty dia toa maizina ary mora mamokatra amin'ny alàlan'ny tranga.
13 Eo aloha sy aoriana
Amin'ny fanaovana taratasy, ny pulp dia miendrika filtration sy tsy fahampiana rano amin'ny alàlan'ny fifikirana amin'ny harato vy. Amin'izany fomba izany, toy ny ilan'ny harato noho ny fahaverezan'ny kofehy tsara sy ny fofona feno rano, ka mamela marika harato, matevina kokoa ny velaran'ny taratasy. Ary ny lafiny iray hafa tsy misy harato dia tsara kokoa. Malama, ka ny taratasy dia mamorona fahasamihafana eo amin'ny andaniny roa, na dia ny famokarana ny fanamainana, ny jiro fanerena aza dia mbola misy tsy fitoviana ny roa tonta. Ny famirapiratry ny taratasy dia tsy mitovy, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fandraisana ny ranomainty sy ny kalitaon'ny vokatra fanontana. Raha mampiasa pirinty taratasy misy sisiny matevina ny fizaran-taratasy, dia hitombo be ny akanjo lovia. Ny eo anoloana ny tsindry fanontana taratasy dia maivana, ny fihinanana ranomainty dia kely kokoa.